PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-04 - ULAXAZE INKAMPANI NGENXA YENKONTILAKI
ULAXAZE INKAMPANI NGENXA YENKONTILAKI
Ilanga langeSonto - 2018-03-04 - Izindaba - LUCKY CAIN
UGCINE esayine nesikhondlakhondla senkampani umculi odunyazwe yizinkampani ezidumile zomculo ethekwini, umuseeq IQ.
U-museeq IQ, ogama lakhe langempela ngusiphiwe Khumalo, uthole ikhaya elisha enkampanini esabalalisa umculo i-universal Music.
Ngokuthola KWELANGA Langesonto ngemithombo eyahlukene, U-IQ (njengoba ebuye abizwe kanjalo), udunyazwe yizinkampani ezimbili ezidumile ethekwini, imayonie Productions ne-afrotainment ngaphambi kokuba asayinwe yi-universal.
Umthombo osondelene nalo mculi udalule ukuthi U-IQ ungene kulo mkhakha engaphansi kwenkampani imayonie Productions kazakes Bantwini.
Kule nkampani kunezingoma azenzile, ezinye ezize zaphuma nakuma-albhamu amaciko abengaphansi kwemayonie okubalwa UDJ Sndara, ubeezory noshon G.
“Ngesikhathi sekumele akhiphe i-albhamu yakhe U-IQ, uzakes naye ubesefuna ukukhipha eyakhe. Ngesikhathi uzakes eseyikhiphile eyakhe akabange esayinaka indaba ka-iq.
“Yilapho U-IQ eqoqe okungokwakhe wayilaxaza imayonie Productions,” kusho umthombo ocele ukungadalulwa ngenxa yokusondelana nalo mculi.
Imayonie izokhumbuleka ngokuvundulula isilomo se-kwaito, ulvovo Derrango naye osayilaxaza le nkampani.
Ngemuva kokuphuma emayonie lo mculi uzame inhlanhla e-afro- tainment.
Omunye umthombo udalule ukuthi nakhona lapho akuhamba- nga njengamagama enkehli njengoba ayethenjiswe izulu nomhlaba.
“Kunezingoma akwazile ukuzikhipha e-afro kodwa kuthe sekumele akhiphe i-albhamu egcwele kwathiwa makalinde. Ulinde waze wakhathala kwazise nezingoma ubeseqedile ukuzenza kodwa engazi ukuthi inkinga ikuphi,” kuchaza omunye umthombo ojwayelene namaciko ase-afro.
Lo mculi onengoma edlalwa kakhulu emsakazweni kulezi zinsuku esihloko sithi" “Brand New” uzifikele mathupha amahhovisi aleli phephandaba.
Echaza ngalezi zinkampani udalule ukuthi inkinga kube yizinkontileka.
“Kuzo zombili lezi zinkampani uma sekumele banginike inkontileka bekuba yinkinga. Inkinga ekhona lapha ethekwini wukuthi kusetshenzwa kakhulu ngobungani nangokwazana bese okwebhizinisi kusala ngaphandle nokuyikhona okubalulekile.
“Mina ngeke ngikwazi ukusebenza ngobungani nangokwazana nomuntu ngoba ngisuka emkhakheni lapho yonke into ibiyenzeka ngendlela yesivumelwano futhi kubhalwe phansi,” kusho lo mculi obesebenza enkampanini yezimoto zohlobo oluphambili.
Uthi kulezi zinkampani ubebachazela abanikazi bazo ukuthi uzimisele ngani futhi nakhona noma eseshiya ubesibeka isizathu sokushiya kwakhe bese bemnikeza izibusiso.
U-IQ ubonge umdu Ngcobo wenkampani itouch Africa ngokumxhumanisa nezikhulu zakwaUniversal njengoba zigcina ngokumsayina ngokugcwele kule nkampani.
U-MUSEEQ IQ ugcine esayiniswe yi-universal Music ngemuva kokungabi nayo inhlanhla ezinkampanini zasethekwini.